Our Story and Our Future
Transforming Lives through digital learning In Myanmar
To be the trusted education provider in Myanmar in providing affordable and quality education through digital education
Nurture future leaders that contribute to the growth of our communities and Myanmar
Create highly employable individuals with our programs through quality education
Buildaresearch center to help enrich and local case studies and applied theories
Myanmar International Business Academy (MIBA) အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် International Qualification Network ( UK ) နှင့် လက်တွဲ ကာ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲ မှုနှင့် အခြား ဘာသာ ရပ်များကို စတင် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ၏ ဒုတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား မန္တလေး တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး City of Oxford College ( UK ) နှင့် လက်တွဲကာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အား ဆက်လက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ( Miba ) ၏ တတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် MICT Park တွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ််တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ UCSI University နှင့် လက်တွဲကာ မဟာတန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ Myanmar International Business Academy ( Miba ) ၏ ပထမမြောက် ဘွဲ့လက်မှတ်ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျင်းပပေးခဲ့ပီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့ တွင် ကျင်းပ ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အထိ ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ပေါင်း (၁၂၀၀၀)ကျော်ကို မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
MIBA တွင် အောင်လက်မှတ်သင်တန်းများ၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းများ၊ ဘွဲ့သင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို သင်ကြားပြသပေးလျက်ရှိပါသည်။ စကော့တလန်၊ United Kingdom ၊ မလေးရှား ၊ စင်္ကာပူ ၊ စပိန်နိုင်ငံတို့ရှိ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်းအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၉.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်း(Higher Education Services)လိုင်စင် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် Miba University အမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Miba University အနေဖြင့် Campus များအား ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် Campus (၄)ခုနှင့် မန္တလေးမြို့တွင် Campus (၁)ခု စုစုပေါင်း(၅)ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Established in 2015, MIBA Group of Higher Education Institutions had taught out more than 17,000 students. Under the Group, we deliver various programs ranging from Certificates, Diplomas, Degrees and Doctorates offers by our prestigious partners from Switzerland, U.K., Malaysia and Singapore. Our5physical campuses are located strategically in Yangon, Mandalay and started online campus in 2020.
We have been awarded the endorsement by the Myanmar Investment Commission (MIC) on 29th May 2019 under the Higher Education Services. We are the youngest group of colleges in Myanmar which are given the endorsement of the Higher Education Services.
2015 Myanmar International Business Academy (MIBA) အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် International Qualification Network ( UK ) နှင့် လက်တွဲ ကာ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲ မှုနှင့် အခြား ဘာသာ ရပ်များကို စတင် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
2016 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ၏ ဒုတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား မန္တလေး တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး City of Oxford College ( UK ) နှင့် လက်တွဲကာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အား ဆက်လက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
2017 ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ( Miba ) ၏ တတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် MICT Park တွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ််တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ UCSI University နှင့် လက်တွဲကာ မဟာတန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
2018 Celebrated 25 years in business with “The Art Day Project” –apartnership.
2019 Released the Arctic Collection the Perennial Collection of handknotted luxury area rugs.
2020 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ၏ ဒုတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား မန္တလေး တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး City of Oxford College ( UK ) နှင့် လက်တွဲကာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အား ဆက်လက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
2021 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Myanmar International Business Academy ၏ ဒုတိယမြောက် ကျောင်းခွဲအား မန္တလေး တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး City of Oxford College ( UK ) နှင့် လက်တွဲကာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အား ဆက်လက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
Enroll University is the Best
We promise you won’t be dissapointed!